#1 Natural Hair Extensions Clip-Ins Weave: Tsvaga Kinky Curly Hair
Quality Kinky Curly Hair Extensions Kwavakadzi Vemavara
Kugamuchirwa KuMusoro Wangu Mutsitsi Chekuwedzera, zvisungo zvose, zvinyorwa zve & wigs zvakagadzirirwa kushandiswa kwenguva refu nekuchengetedza unhu hwakasimba kuti uone kuzadza. Mushure memazana gumi ekupa ruvara rwakasiyana rwevakadzi vane ruvara, Yakava basa redu rokubatanidza kugadzikana pasina kukanganisa kuwanda kwemakumbo ose emvere.
MHEHE akaisa zviuru zvezvikwata zvezvisikwa zvepanyama kune vakadzi pasi pose, izvo pamwe pamwe zvinobvumirana nezvinhu zviviri. Vanoda zvikwata zvakanakisisa uye nepamusoro-soro basa revatengi kubva kune imwe kambani inovatsigira munguva dzose dzekukura kwavo. Tinoita kuti tinyane 3 uye chinyorwa 4 mvere mavara.
Top Quality Hair Natural Clip-In Extensions
Kune nzira dzakawanda dzaungagona kuuraya uye kupa hunodiwa hunodikanwa kutarisa kwako nemavhudzi ezvinyorwa-clip-ins. Kuisa zvikamu zvedu zvine utano, iwe pakarepo unogona kutaurira zvaunobata nehupikirwo zvehutano, zvese zvezvikamu zvedu zvakanyatsoenderana nekinky curly hair. Izvo zvinhu zviri chokwadi kukusiya iwe unofara sezvo inowedzera yakaisvonaka yevheti yako. Tiri kufara kukutanga iwe parwendo rwako; zvese zvemashure edu zvakakoswa newe mupfungwa! Nokudaro ipai michina mumhando dzakasiyana-siyana uye maitiro anenge akakwana kwauri. Iva nechokwadi chekubatana nekambani yeVIP kuti udzidze pamusoro pezvinhu zvese zvitsva zvedu nekuvandudza.
Premium Kinky Bvudzi
Our afro kinky hair extensions ndeyevakadzi vane ruvara. Chimiro chine simba rakakura uye rakasvibirira rinonzi 4 strand. Zvisungo zvedu ne-clip-ins, wigs uye zvivharo zvakazara uye zvakajeka kufadza.
Vakawanda veAfrica yeAmerica vanoshandisa kinky maitiro edu kuti aenzane munzvimbo dziripo. Iyi nzira yekuisa zvikwata zvedu inofadza uye yakakwana kune dzimwe nguva. Kwete chete zvigadzirwa zvedu ndezvokutanga kwehutano izvo zvinogara kwenguva refu, asi isu takaitawo kuti vatengi vedu pa Instagram vataure kuti vakave nezvikwata zvavo zvitanhatu kwemakore. Takashandisa mutakuri wedu, hongu, akawana izvi.
Vateereri vedu vatitaurira kuti vakawana zviri nyore kukura bvudzi ravo rekushandisa vachishandisa zvidzidzo. Rwendo rwekusimbisa vhudzi rako uye kutarisa zvakanakisa inzira. Ndicho chikonzero pano pa MHE ndiyo basa redu kuti tibatsire vatengi vedu kutarisa uye vachinakidze.
Tinoziva kuti tinoisa zvikwata zvakanakisisa munyika nokuti vatengi vedu vanotora kubva kumativi ose enyika. Kwose kupi mudzimai ari iye anoda kuti iye aoneke akaperedzwa nemakumbo ekubwinya anotarisa zvakasikwa uye anoshamisika, unogona kuva nechokwadi kuti akashandisa chigadzirwa chatinotenga. Ndicho chimiro chinonyanya kukosha chepamusoro-soro kinky hair curly weave uye kushandiswa kwevatengi paIndaneti.
Ichaita sokunge kuti vhudzi rako rakawanda kuputika kunopoteredza chiso chako apo iwe unoshandisa curly clip-muzvinyorwa zvevhudzi. Vanouya muhutano hwakasiyana-siyana uye mavarawo zvakare.
Kutenga chikamu-ins icho chinogona kuita kuti kusanganisa bvudzi rezvisikwa nezversions kunoita kuti chimiro chako chizere uye chigadziridzwe zvose kamwechete. Isu tinopa zvizere zvekubata kwemavara ose, urefu, uye zvakasiyana siyana zvaungada. Kushandisa-clip-ins kuti ifukidze chikamu chinokura chekucheka, kana chikamu chisina kunaka chekushanduka kubva kumvere yakananga kusvika kukura kwezvisikwa kunoitwa nyore nyore. Musoro wemavhudzi-nyuchi dzinobvumirawo bvudzi kuti rive nyore kunyorwa nenzira dzakasiyana-siyana. Ponytails, up-dos, uye mashizha zvakare mabheji anopiwa pawebsite. Clip-ins ndiyo nzira yakakwana yokushandura bvudzi rako risina kuparadza mamiriro akanaka emuviri wako chaiwo. Kuchengetedza kinky yako remy virgin hair bundle deals kudhonza kana kururamisa zuva rega roga kuitira kuti kutarisa kwako kutarise kunogona kukonzera bvudzi kana kurasikirwa. Paunoshandisa zvidimbu zvakanyanyisa, unogona kutarisa zvinoshamisa uye kudzivirira nzvimbo yako kubva pazuva nekusvimha misodzi zvinogona kuita kuti ive yakaoma.
Isu Tinoita Kune Vose Black Hair Textures
Saka kana iwe une 4A, 4B, 4C saka takufukidzira. Tinonzwisisa huzhinji hwakaoma kunzwisisa kuti tive nemakumbo akaisvonaka, funga kuongorora maitiro edu, saka ona chii chinokukodzera iwe zvakakwana. MHE ndiye 100% yakagadzirwa nevanhu vema-black uye inoshandiswa mumhando yepaIndaneti iyo ikozvino inoshumira makambani munyika dzinopfuura 100 pasi pose nekutengeserana kwenyika yose.
Izvo zvave zviri kutarisa MHESE kuita kuti vakadzi vemavara vaonekwe nemashamba kubva ku 10 ", 12" 14 ", 16", 18 "20" 22 ", 24" 26 "28" 30 "iyo iri nyore kutora. Vanasikana vanoti vakawana kuti zvigadzirwa zvedu ndizvo zvavanoda kuti vauraye! Tarisa iyi iyi mutsva wekasi wekare, "Ichokwadi pamusoro pekudzivirira kwebvudzi. "
@jastanae 😍😍 beauty beauty is her name !!! ·
Kuedza kuva seizvi zhizha rose '19 LOL 😝 ...
Divas uye gents vanoramba vachifa vhudzi rako jena. Embrace ...
Ini nguva dzose apo LOL. Ini chaizvoizvo ndinofanira kubuda pane ...
Yea yega tinenge tiri pakati pe2019. Yeuka ...
Ndezvipi pfungwa dzako? Icho chakarurama here kana kuti chikafu?
Vanoramba vachiita kuti vave sezvizvi here?